Yaasmiin Cumar oo ku guuleeysatay tartan suugaaneedkii “Gabyaagga Deegaanka” | Somaliska
Yaasmiin Cumar oo ku guuleeysatay tartan suugaaneedkii “Gabyaagga Deegaanka”
Xaafadda Hammarkullen ee magaaladda Göteborg ee caasimadda labaad ee dalka Iswiidhan, ayaa waxaa maalintii shalay aheyd aqalka ummadda lugu soo gabo gabeeyey tartan suugaaneed loogu magac darray “Gabyaagga Deegaanka” oo ay ku tartamayeen dhalinyarro qowmiyaddo kala duwan ka soo jeeda.
Tartankan ayaa waxaa kaalinta koowaad ka galay YaasmiinCumar Cabdulqaadir oo ah gabyaaggii ug da’da yaraa ee tartankaasi ka qeyb qaadaneeysay.
“Markasta gabay ayaan qori jiray, mana aheyn mid meel ku jiheeysan mana aanan aqoon gabay waxa uu yahay” ayey tiri Yaasmiin oo misna farta ku fiiqday in tartan suugaaneed xagga gabayadda ee sanadkii hore la qabtay uu u ahaa mid ku dhiirageliyey in sanadkan ka qeyb qaadato islamarkaasina noqoto qofkii kaalinta koowaad ka galay.
Ma ahan markii ugu horeeysay oo ay dhalinyarro soomaaliyeed oo suugaanta gaar ahaan xagga gabayadda xiiseeya ay ka qeyb qaataan tartan noocaan oo kale oo loogu talagalay deegaandda ay ajaanibtu ka degan tahay magaalooyinka waa weeyn ee dalkaan Iswiidhan. Waa markii labaaad oo sanadkan gudihhiisa ay dhalinyarro soomaaliyeed oo ku dhaqan dalkaan Iswiidhan ku guuleeystaan tartan suugaaneedka “Gabyaagga Deenka” oo magaalooyin kala duwan lugu qabto.
WAR DEG AH: Saddex ruux oo lugu dhaawacay xaafadda Bergsjön ee Göteborg
Munaasabadda 15ka mey oo lagu xusey Magaalada Gävle